Iran: Sucuudigaa qorsheeyey iscasilaadda Xariiri - BBC News Somali
Iran ayaa iscasilaadii lama filaanka ahayd ee ra'isal wasaaraha Lubnaan, Sacad Al-Xariiri, ku tilmaantay mid loogu talo galay in xiisad lagaga abuuro Lubnaan iyo guud ahaan ba gobolka. Hadalkii uu jeediyey ee uu ku sheegay iscasilaadisa ayaa Al-Xariiri wuxu si ba'an ugu dhaliilay Tehran iyo dhaqdhaqaaga Shiicada Lubnaan ah ee Xisbullah ee ay Iran taageerto.
Talaabadan uu qaaday ayaa Lubnaan dib ugu celinaysa hubanti la'aantii siyaasadeed.
Sacad Al-Xaraiiri wuxu carrabka ku adkeeyey Iran markii uu jeedinayay hadalkii uu ku shaaciyey iscasilaadiisa, waxaanu ku eedeeyey Tehran in ay colaad iyo burbur ka abuurto meel kasta oo ay gacanteedu gaadho. Hadalkiisan uu ka jeediyey Sucuudiga ee aanu ka odhan Lubnaan dhexdeeda ayaa dad badan durbadiiba ku dhaliyey in ay arinta u arkaan go'aan Riyaad ka dambayso.
Mid ka mid ah la taliyeyaasha hogaamiyaha Sare ee Iran ayaa ku eedeeyey Sucuudiga in ay tallaabadan wada qorsheeyeen Maraykanka oo intan madaxweyne Trump hogaanka u qabtay si aad ah u taageera aragtida siyaasadeed ee Sucuudiga ka leeyahay Bariga Dhexe.
Dhamaan arimahaas oo dhami waxay sii kordhin doonaan walaaca ka jira Lubnaan oo ah in dalku haatan gego u noqday iska hor imaadyo heer gobol ah oo u dhaxeeya labada quwadood ee loolanku ka dhexeeyo.